स्थानीय तहको गैर जिम्मेवारी, सबै रोगको औषधि सिटामोल
चैत्र २३, २०७५ मध्य नेपाल संवाददाता
सबै रोगको एउटै औषधि सिटामोल ! सुन्दा अचम्म लाग्छ । तर यो तितो सत्य हो । साधारणतया विरामी हुँदा मान्छेको टाउको दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने, ज्वरो आउने लगायतका समस्याहरु हुँदा सबैले एकै किसिमको औषधी पाउने गरेका छन्, त्यो हो ‘सिटामोल’ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि पर्सा जिल्लाको ग्रामीण भेगका दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल बाहेक अत्यावश्यक कुनै पनि औषधि पाइँदैन ।
संघीय सरकारले स्वास्थ्य चौकीलाई ३९ प्रकारका औषधि दिने गरे पनि अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल, बु्रफेन बाहेक अन्य औषधिबाट स्थानीय जनता वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा सबै प्रकारको औषधि पठाए पनि सेवाग्रहीले कुनै पनि समस्या लिएर स्वास्थ्य चौकी पुग्दा सिटामोल तथा बु्रफेन बाहेक अन्य औषधि नपाएको गुनासो गरे । सरकारले दिने अन्य औषधि आखिर कहाँ जान्छ त ? राम्रो तथा महँगो औषधि कर्मचारीले नै बाहिरको औषधि पसलमा बेच्ने गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालक समिति नभएकाले कर्मचारीले मनपरी अन्य औषधि नजिकको औषधि पसलमा लगेर बेच्छन् । जिराभवानी गाउँपालिका निर्मलबस्तीका पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रकै कारण स्थानीयवासी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएको बताए । पर्सा जिल्लामा ८२ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । सामान्य उपचार मात्र हुने स्वास्थ्य चौकीमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए उपचारका लागि सहर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
पकहामैनपुरमा रहेका स्वास्थ्य चौकीका अहेब अनिलकुमार यादवले गाउँपालिकाले अन्य औषधि भन्दा सिटामोल बढी दिने गरेकोले यस्तो अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहतमा हुँदा सबै औषधि उपलब्ध हुने गथ्र्यो । तर स्थानीय निकायमा गाभिएपछि सिटामोल, ब्रुफेन जस्ता सामान्य प्रकृत्तिका औषधि मात्रै बढी आउने गरेको कारण स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल बाहेक अन्य कुनै औषधी नपाइने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले क्षयरोगको बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराए पनि पर्सागढी नगरपालिका – ६ चैनपुरमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले उक्त रोगको औषधि नभएको भनी फर्काउने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भने यसको विपरित जवाफ दिदै सम्पूर्ण रोगको औषधी स्वास्थ्य चौकीमा पाउने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । क्षयरोगको औषधी खास गरेर जिल्लाको सम्पू्र्ण स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौकीमा पाउनु पर्ने औषधी हो । तर त्यो पनि त्यहाँ पाउँदैन । स्थानीय प्रतिनिधिले भने क्षयरोग लगायतका सबै औषधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क पाउने गरेको दावी गर्छन् । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा अति आवश्यक पर्ने केडिनालिन, चारकोल जस्ता औषधिहरू डेढ वर्ष देखि छैन । तर सिटामोल, ब्रुफेन जस्ता औषधिहरू व्यापक मात्रामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ ।
ल्याब, एक्स—रे मेशिन नभएकोले सामान्य जाँचका लागि बिरामीहरूलाई समस्या पर्ने गरेको स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू आफै स्वीकार्छन् । सङ्घीयता लागू हुनुभन्दा अघि जनस्वास्थ्य कार्यालयले सरकारको मापदण्ड अनुसार सबै औषधिहरू स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउने गर्दथ्यो । तर स्थानीय सरकारको मातहतमा स्वास्थ्य चौकी गएपछि सिटामोल, ब्रुफेन, अलबेण्डाजोल जस्ता औषधिहरू मात्र पाइने गरेकाले सेवाग्रहीहरूले बताए । पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तहमा ८३ स्वास्थ्य चौकीहरू छन् । तर ती सबैको अवस्था खासै भिन्न छैन । चाहे महानगरपालिका होस्, नगरपालिका होस् वा गाउँपालिका नै किन नहोस् उनीहरुले भने ।
शनिवार, चैत्र २३, २०७५, ११:०४:००